Izingubo ezindala namazambane kanye ne-broccoli | Ikhishi Recipes
UMaria vazquez | 08/01/2022 10:00 | Inyama Ungadliwa
Uyakhumbula ngesonto eledlule sikutshela ukuthi ngeke silahle noma yini ebesiyisebenzisile ukulungiselela isizinda esimnyama? Kungenzeka inyama nemifino esetshenzisiwe ukuyilungiselela abanayo ukunambitheka okuningi ngemva kokuyiphakela, kodwa lokho akusivimbeli ekulungiseleleni isitshulu esimnandi nalezi: Izingubo ezindala ezinamazambane kanye ne-broccoli.
Izingubo ezindala Kuwukudla okuphekwe ngokusala kokunye ukudla futhi yilokho kanye esizokwenza lapha. Thatha inyama nemifino esiyisebenzisayo ukulungisa isizinda esimnyama, isigamu se-broccoli esasiyiphekile, amanye amazambane bese uyiguqula ibe isidlo somndeni wonke ngokufaka utamatisi omncane nezinongo ezithile.
Kokubili utamatisi nezinongo, ikakhulukazi lezi, zibaluleke kakhulu ukunikeza ukunambitheka kulesi sidlo. Ekhaya sisebenzise ingxube esetshenziswa eNdiya, Bangladeshi, Pakistani nezinye cuisines Southeast Asian: garam masala. Ngabe sizongena ebhizinisini?
Izingubo ezindala ezinamazambane kanye ne-broccoli esizipheka namuhla iresiphi esebenzisa ngokunenzuzo inyama nemifino esetshenziselwa ukwenza isizinda esimnyama.
Ukusikwa kwenyama nemifino kungemuva elimnyama (bona iresiphi)
Umhluzi wemifino noma inyama
½ ithisipuni i-garam masala
½ i-broccoli ephekiwe
Sihluba amazambane kanye nezaqathi. Eyokuqala siyisika ibe ama-cubes kanti eyesibili ibe yizicucu eziwugqinsi.
Siwafaka ku-casserole, usawoti kanye nopelepele futhi simboza ngomhluzi, ukupheka kuze kucishe kuthambe.
Ngakho, sihlanganisa ama-trimmings nemifino Kusukela kusizinda esimnyama, utamatisi othosiwe, i-garam masala, ne-broccoli bese upheka yonke eminye imizuzu engu-2 phezu kokushisa okuphezulu.
Sikhonza izingubo ezindala ngamazambane kanye ne-broccoli eshisayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izitsha » Inyama Ungadliwa » Izingubo ezindala ngamazambane kanye ne-broccoli